Wararka Maanta: Jimco, July 6 , 2018-Shirkii hay’addaha siyaasada dalka oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay
Jimco, July, 06, 2018 (HOL) – Shir wadajir ah oo u dhaxeeyay Hay’adaha u xilsaaran Siyaasadda dalka iyo Guddiga Farsamo ee Wada xaajoodka Arrimaha Federaalka oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ayaa ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho.
Intii uu socday shirka ayaa waxaa looga hadlay arrimaha Dastuurka, Federaaleynta dalka, doorashooyinka, Hanaanka Cadaaladda ee Federaalka iyo Awood Qeybsiga.
Khubaro ka kala timid dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa ka dooday arimo muhiim oo ku saabsanaa shirka.
Wasiirka Arrimaha Dastuurka Mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo gebagebada shirka ka hadlay ayaa ka mahadnaqay talooyinka ay soo jeediyeen khubarada.
“Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo aqoonyahanada ka soo qeybgaleen shirkan oo runtii soo jeediyeen talooyin wanaagsan oo ku saabsan arimihii looga hadlay shirka ee uu ka mid ahaa Dastuurka” ayuu yiri Wasiir Xoosh.
Waxaa kulanka soo xiray Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdi Maxamed Sabriye isagoo uga mahadceliyay Wasaaraddda Arrimaha Dastuurka doorkeeda qabanqaabineed ee shirka.